5 Saadaalinta Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee sanadka 2014 | Martech Zone
Miyay tahay inaan la yaabno wakaalada suuqgeynta warbaahinta bulshada Soo bandhigid ayaa la yimid shan isbeddel oo suuq-geyn ah oo la daawanayo sanadka 2014 - kuwaas oo dhammaantood muujinaya koritaan la xiriira marketing warbaahinta bulshada?
Macaamiisha noqon doona suuqleyda waxyaabaha ka kooban.
More is dhexgalka bulshada galay suuq geyn dhaqameed.
Isku xirka email la suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Bulsho badan ganacsiga.
More ololaha warbaahinta bulshada guud ahaan.
In kasta oo waxqabadka ku saabsan warbaahinta bulshada ay sii kordhi karto, waxaan xoogaa rajo ka qabaa dadaallada suuqgeynta ee la xiriira warbaahinta bulshada. Waxaan aaminsanahay inay jiri karto dhaqdhaqaaq badan, laakiin dadaal yar. Qalabka loogu talagalay suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa sii wadi doonta hagaajinta oo ay siineysaa suuqleyda dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u wadaagaan, u iibiyaan ugana jawaabaan warbaahinta bulshada - iyada oo aan waqti badan lagu qaadan halkaas! Iyada oo koritaanka qof walba uu noqon doono buuq badan wayna adkaan doontaa in la soo jiito macaamilka iyo dareenka ganacsiga illaa aad qabanayso shaqo cajiib ah.
Tags: Ganacsigaemaylka iyo baraha bulshadaganacsigasoo bandhigganacsiga bulshadaMedia Social Suuq
Jan 20, 2014 saacadu markay ahayd 11:41 PM
Macluumaadkaaga-garaafku wuxuu leeyahay aragti fiican oo taagan, oo si sahlan loo akhriyi karo oo indhaha ku soo jiidanaya